नेपाल- बलिङ, भारत- ब्याटिङ
सन्दीप लामिछाने भारतमा थिए । आईपीएल खेल्न । मोदी नेपालमा थिए, नेपाल खेल्न । सन्दीप बल लिएर भारतमा दौडिरहेका थिए । विराट कोहली हातमा ब्याट लिएर पर्खिरहेका थिए ।
त्यतिखेर केपी ओली बोली लिएर जनकपुरतिर दौडिरहेथे । नरेन्द्र मोदी हातमा माइक लिएर उभिरहेका थिए । हामी नेपालीको नाकमुख बन्द हुनेगरीको नाकाबन्दीपछि मोदी नेपाल आएका थिए । माग्नुपर्थ्यो तर मोदीले नाकाबन्दी गरेकोमा माफी मागेनन् । बरु ओलीले मोदीसँग मागे । माफी हैन । अरू नै केही ।
दुवै सायरहरू मिलेर जनकपुरमा मुसायरा गरे । मोदीले सीता रामको कहानी सुनाए । ओलीले उखान सुनाए । सक्यो । मट्याङ्ग्राको नास ।
लाचार नेपाली जनताले केही गर्न सकेनन् ।
तीनै लाचार नेपालीहरू संसारभरिबाट सन्दीपले भारतमा खेलिरहेको त्यो क्रिकेट खेल हेरिरहेका थिए । सारा नेपालीहरू चाहन्थे कि हाम्रो सन्दीपले विराट कोहलीलाई आउट गरुन् । कारण थियो- नेपालीले विराट कोहलीमा नरेन्द्र मोदी देख्थे । कारण थियो- कोहली भारतका सबैभन्दा शक्तिशाली ब्याट्सम्यान थिए । मोदी भारतका सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे ।
जसरी भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई हेपेको थियो, त्यसरी नै नेपाली चाहन्थे कि सन्दीपले पनि विराट कोहलीलाई क्याच आउट नगराऊन् । एलबीडब्लूमा नपारुन् । सिधा क्लिन बोल्ड गरून् ।
सन्दीपले गर्न सक्दो गरे । तर, कोहलीलाई आउट गर्न सकेनन् ।
ओलीले गर्न चाहेको गरे ।
नाकाबन्दीमा मोदीले नेपालीको पेट र नेपालको छाती दुवैमा लात हानेका थिए । तीनै मोदीलाई ओलीले टाउकोमा बोकेर हिँडेँ ।
भ्रमण सकेर फर्किएपछि मोदीले माफी नमागेकोमा नेपालीहरू रुष्ट भए । तर, खेल सकेर मैदानबाट फर्किएपछि सन्दीपको खेललाई लिएर भारतभरि प्रशंसा भयो । सन्दीप भारतीय क्रिकेटप्रेमीको मनमा न्यानो गरी बसे । सजिलो गरी बसे । मोदी नेपालीको आँखामा अप्ठ्यारो गरी बसे ।
भारतीय जनताले सन्दीपलाई हेर्दा नाकाबन्दी सम्झेनन् । नेपालमाथि भएका पहिलेका असमान सन्धि सम्झेनन् । काठमाडौंमा खेलिने खेलमा दिल्लीले गर्ने म्याच फिक्सिङ सम्झेनन् । उनीहरूले केवल सन्दीपको बलिङ सम्झिए । बस एक शानदार खेलाडी सम्झिए । उसको सुन्दर खेल सम्झिए । क्रिकेट सक्झिए ।
सन्दीपलाई आईपीएल खेल्नका लागि आफ्नो क्लबमा लिने भारतीय क्रिकेट क्लबले पनि सन्दीप कुन पार्टीको हो, सोचेको थिएन । यो सन्दीप त त्यो देशको केटो हो, जुन देशमा कुन दिन प्रधानमन्त्री बदलिन्छ र त्यसपछिको चुनाव कुन मितिमा हुन्छ भन्ने कुरा काठमाडौंलाई भन्दा पहिले दिल्लीलाई थाहा हुन्छ । दिल्ली डेयर डेभिल्सले पक्कै यसरी सोचेन ।
उनीहरूले मैदानमा सन्दीपको खेल पढेर उनलाई आफ्नो क्लबमा लिएका थिए । सुधीर शर्माको पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ पढेर हैन । उनीहरूलाई नेपालमा उंगली गर्न सन्दीप चाहिएको थिएन । केवल सन्दीपका औँला चाहिएको थियो ।
आईपीएलले अलिअलि बजार त जरुर हेर्छ । आफूले कमाएर अरूलाई पनि उकास्नु जायजै छ । तर, त्यो खेलको दिन एउटा मान्छेप्रति ठूलो अन्याय भयो । भावनात्मक अन्याय । ती मान्छे थिए- विराट कोहली । दुश्मन कमजोर भैजाओस् भन्ने नजरले झैँ नेपालीहरूले विराट कोहली कमजोर होस् भन्ने कामना गरे ।
न त्यो क्रिकेट नेपाल र भारतबीच भएको थियो । न त्यो दिन विराट कोहली आउट हुँदा नेपाललाई कुनै फाइदा थियो । तर, संसारभरlका नेपालीको नकारात्मक ऊर्जा विराट कोहलीमाथि खनियो । लाखौँ नेपालीले कामना गरे कि विराट कसैगरी आउट हुन् । यो कत्ति नमज्जाको कुरा थियो । एउटा शासकको मुहार उनमा देखेर नेपाली उनीप्रति त्यो दिन नकारात्मक बने । कोहलीको विरोध कहाँसम्म विरोधाभाषपूर्ण थियो भने जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा विराट कोहलीलाई सम्भवत: संसारमा सबैभन्दा बढी मन पराउने देश नेपाल हो । त्यो दिन विराट कोहलीमाथि नमीठो अन्याय भो । नेपालीले नचाही नचाही पनि नाकाबन्दी गर्ने सरकारको रिस उनीमाथि पोखे ।
शासकको अहङ्कारको सजाय त्यो देशका जनताले पाउँछन् । कलाले पाउँछ । संगीतले पाउँछ । त्यसको उदाहरण हिन्दी फिल्म/गीत नेपालमा प्रतिबन्धित हुनुपर्छ भनेर उठिरहने आवाज हो । जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा भन्ने हो भने भारतीय चलचित्र सम्भवत: संसारमा सबैभन्दा बढी हेरिने देश नेपाल हो । शाहरुख खानका सम्भवत: सबैभन्दा बढी फ्यान नेपालमा छन् । हिन्दी गीत सम्भवत: संसारमा सबैभन्दा बढी नेपालमा सुनिन्छन् ।
तर, यो माया भारतलाई नेपालमा मात्रै हैन । यो रोटी दोहोरो पाक्छ । मनीषा कोइरालालाई स्वीकार्ने बलिउडले कोसीको पानीमा कति हक जमाउन सकिन्छ भन्ने लोभले स्वीकारेको हैन । मनीषाभित्र अभिनयको नदी कति गहिरो छ भनेर स्वीकारेको हो ।
भारतीय टेलिभिजन शो सारेगमपमा हाम्री मेनुका पौडेलले गीत गाइन् । त्यो सुनेपछि कार्यक्रमका निर्णायकमध्ये एक भारतका प्रख्यात संगीतकार शेखरको घाँटीमा केही अड्कियो । आँसुलाई झर्न दिँदै उनले भने, ‘आपकी गायकीको जज करनेकी मेरी औकात नही है ।’ आँखा नदेख्ने मेनुकाको स्वरलाई शेखरले देखे । ती भारतीय संगीतकारले मेनुकाको हौसलालाई अलि अघि सारिरहँदा उनमा नेपाल-भारत सीमाका स्तम्भलाई नेपालतिर सार्ने लोभ थिएन ।
रियालिटी शोहरूले अलिअलि बजार त जरुर हेर्छन् । आफूले कमाएर अरूलाई पनि उकास्नु जायजै छ ।रिपब्लिक टीभी नामक मिडियाको मुखौटा ओढेर अर्नव गोस्वामी र उनका रिपोर्टरहरू मोदीको राजनीतिक पुच्छरको रौँ हल्लाउँछन् । त्यसरी पुच्छर हल्लाउने ती भारतीय फरक हुन्, अनि मैदानमा सन्दीपले विकेट लिँदा हात हल्लाउने भारतीय फरक ।
जी टीभी नामक मिडियाको मुखौटो ओढेर सुधीर चौधरी र उनका रिपोर्टर मोदीको राजनीतिक काखीका रौँ हल्लाउँछन् । त्यसरी रौँ हल्लाउने ती भारतीय फरक हुन्, अनि मेनुकाले गीत गाउँदा भारतमै टीभी हेर्दै मेनुकाको स्वरसँगै प्रेमले टाउको हल्लाउने भारतीय फरक ।
भारतीय प्रख्यात गायक मोहित चौहान भारतको एउटा पहाडमा गीतार बोकेर एक्लै बस्छन् । अनि भन्छन्, ‘मेरा बहुत पुराना कलेज टाइमका फेभरेट गाना है ।’ तपाईंहरूलाई सुनाउँछु भन्दै उनी गीतको शब्दको अर्थ नेपालीमा अनुवाद गर्छन् । अनि गाउँछन्:
‘गहिरो गहिरो सागरजस्तै
अचल पहाड जस्तै
हाम्रो माया यस्तै हुन्छ र ?
हुन्छ नि ।’
अनि आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्छन् ।
मोहित चौहान नवविस्तारवादी भारतका लिडर हैनन्, जो भारतीय जनतालाई नेपाली गीत सुनाइरहेछन् ।
बनारस जाँदा रेल छुट्यो । रमेश सायन, नवीन प्राचीन र म अल्मलियौँ ।
एक स्थानीयलाई भन्यौँ, ‘हामी नेपालबाट बनारस हिँडेको । रेल छुट्यो । अब कसरी पुग्ने होला ?’
बाटोमा अण्डापाव खाँदै गरेका ती भारतीयले भने, ‘नेपालसे ? नेपाल तो पिछले साल हम भी गएथे ।’ उनले नेपाल सम्झिँदा के सम्झिए थाहा भएन । नेपालमा कुन नेपालीले कसरी माया देखाको सम्झियो कुन्नि, त्यसपछि त उनले खाँदाखाँदैको अण्डापाव छोडेरै हामीसँग हिँडे । करिब डेढ किलोमिटरसम्म सँगै । हामीलाई बस भएको ठाउँमा पुर्‍याइदिए । खलासीलाई हाम्रा सारा अप्ठ्यारा सुनाइदिए । हामीलाई सजिलो गराइदिए । बदलामा केही मागेनन् । उनी भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ को खुफिया एजेन्ट थिएनन् ।
छुट्टिने बेलामा अँगालो हाल्दै भावुक भएर आफ्नो पोख्त हिन्दी भाषामा रमेश शायनले भन्थ्यो, ‘अनि कि, मिलेको बेला फिर भी नेपाल आइए ल ? हम भी अप्ठ्यारो परेको बेला सघाता हूँ ।’
राजनीतिले पहिलेदेखि टुक्र्याइरहेको हिन्दुस्तान र नेपाल फरक हो । खेलले, कलाले, संस्कृतिले, गीतले, मनले पहिलेदेखि जोडिआएको हिन्दुस्तान र नेपाल फरक हो ।
नेपाल-भारत रोटीबेटी मात्रै पनि हैन । मा-बेटा पनि हो । यो लेख लेखिरहँदा दिल्लीकी ती दिलवाली आमाको खुब याद आइरहेछ । चार वर्षअघिको कुरा हो । एक अन्तर्राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा कविता सुनाउन नेपालबाट म र रूपेश भट्टराई दिल्ली गएका थियौँ । त्यो महोत्सवमा मैले ‘सगरमाथाको गहिराइ’ अंग्रेजीमा सुनाएँ । अनि ‘सतीदेवीको गाण्डिव’ हिन्दीमा ।
कविता सकिनेबित्तिकै दर्शकको रूपमा बसिरहेका एक व्यक्ति उठे । हिन्दीका प्रोफेसर रहेछन् । नरम स्वरमा उनले भने, ‘अगर आप बुरा नहीँ मानेंगे तो क्या आप इस कविताको आपकी भाषामेँ हमे सुनाएंगे ?’
म मख्ख परेँ, किनकि म अर्काको देशमा आफ्नो भाषामा कविता सुनाउँदै थिएँ । सुनिसकेपछि त्यहाँ उपस्थित भारतीय स्रोता/दर्शकले भन्नुभयो, ‘आपकी कविता हिन्दीमे सुनते ही बहुत सुन्दर लगी थी । लेकिन कविता सुन्नेकि वो असली मजा जो होती है ना, वह मजा नेपालीमा सुननेसे ज्यादा आया । नेपाली भाषामे सुनानेके लिए बहुत बहुत सुक्रिया ।’
ती भारतीयहरू नेपालमा उनीहरूको भाषा लाद्नका लागि खटिएका संस्थाका पहरेदार थिएनन् । कार्यक्रम सकियो । हामीलाई दिल्लीमा एक आयोजक साथीको घरमा राखिएको थियो । हामीले त्यो घर छोड्ने दिन आयो । घर छोड्ने बिहानै केके आवाज आइरथ्यो । थाकेर ढिलो सुतेको जिउलाई त्यो आवाजले अलि झर्को नि लागिरहेथ्यो । बिहान उठ्दा पो थाहा भयो त्यो घरकी आमाले त छोराहरू जान लागे भनेर एकाबिहानै उठेर बिहानभरी खाना बनाउनुभएछ । थरीथरीका मीठाइ बनाउनु भएको रहेछ ।
हामीलाई जबर्जस्ती खाना थप्न लगाउँदै भन्नुभयो, ‘अगर तुम यह सब नहीँ खाए तो नेपालमेँ तुम्हारी माँ नाराज हो जाएंगी ।’
आमा कुनै विषयको प्रोफेसर हुनुहुन्नथ्यो । उहाँलाई न हामीले लेखेको कविताको मतलब थियो, न त हामीले बोल्ने भाषाको । उहाँलाई त यति मतलब थियो कि दुइटा छोराहरू आफ्नी आमाभन्दा धेरै टाढा आएका छन् । यदि उनीहरू अहिले पेटभरि खाएनन् भने बाटोमा भोकाउँछन् ।
ती आमालाई न थाहा थियो न मतलब थियो कि सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि नेपाल सबैभन्दा कमजोर भएको बेला गरिएको थियो । नेपालले भोगेको त्यो तीतोपन भारतकी ती आमाले हाम्रा लागि बनाएको गुलियो लड्डुमा कहीँ कतै थिएन ।
केही दिनअघि पुराना साइकल किन्दै एक भारतीय दाइ हाम्रो घरमा आएका थिए । मेरी आमाले ती दाइलाई हामीले खाँदै गरेको तरुल दिनुभयो । चिया दिनुभयो । ती दाइले आमाले दिएजति सबै तरुल खाए । त्यो दिन पक्कै भारतमा उनकी माँ नाराज भइनन् होला ।
नेपाल-भारत रोटीबेटी मात्रै पनि हैन । बेटा र माँ पनि हो । बडाभाइ छोटा भाइ त झनै हैन । केही दिनअघि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा झुर पत्रकारैलाई भए पनि एक शानदार जवाफ दिनुभयो, ‘भूगोलमेँ हम छोटे बडे होंगे, लेकिन एक राष्ट्र के हिसाबसे हम बराबर हैं ।’
हामी मख्ख पर्‍याैँ । त्यो सम्मानजनक बोली थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको । त्यो बोली नेपाली जनताको सम्मानमा बोलिएको थियो, भारतीय जनताको अपमानमा हैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले फुल टस बललाई चौका हान्नुभयो । हामीले ताली बजायौँ । हामी निराश थियौँ, एउटा चौका देखेर खुसी भयौँ । हाम्रो सम्मानमा हान्नुभएको त्यो चौकाका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति एक स्टेडियम सम्मान छ ।
तर, अर्को टिमको बलर र फिल्डरलाई गाली गर्ने माहौल बनाउन कहिलेकाहीँ ब्याट्सम्यान यस्ता एक/दुई चौका हान्छन् । समर्थकलाई अलमल्याउँछन् । अनि रन नबनाई मैदानमै टिकिरहन्छन् । आफ्नो पारी लम्ब्याइरहन्छन् । टिमले जितोस् हारोस् मतलब गर्दैनन् । केवल आफ्नो पारी लामो बनाउँछन् । आफैँले पनि राम्रो रन बनाए त टिमलाई राम्रै हुने हो नि । तर, त्यो पनि गर्दैनन् । समर्थक हतास् भएको बेला बलरसँग सल्लाह गरेर एउटा फुलटसमा चौका/छक्का हान्छन् र दर्शकलाई छक्याउँछन् । म्याच फिक्स्ड हुन्छ ।
जस्तै, यिनै केपी ओली हुन् जसले घुँडो मुन्टो गरी आफ्नो पारी लम्ब्याउनका लागि भर्खरै क्रिकेटको पिच खनेर भागेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ७, २०७७, ०८:२०:००